‘ओली र नेपाल समूहको एकमत– पार्टी एकता बलियो बनाउने’ Canada Nepal
Jun 17 2021 | २०७८, आषाढ ३गते
२०७८, आषाढ ३गते
थप क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
चलाख हात्ती, जसले तिर्खा लागेमा यसरी आफै धारा चलाएर पानी पिउछ
काठमाडौं उपत्यकामा अर्को साताबाट स्मार्ट लकडाउन, खाडी मुलुकमा फेरि हवाई उडान गरिने
आज देशका यी स्थानमा मेघगर्जनसहित ठुलो पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह
भद्रकाली माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज असार ३ गते बिहीबारको राशिफल
११७ करोड पारिश्रमिक लिएका अक्षयकुमारले 'बेल बटम' मा कति पारिश्रमिक घटाए ?
कोरोनाभाइरस चीनको ल्याबबाट ‘लिक’ भएजस्तो लाग्दैन– बेलायती प्रधानमन्त्री
‘ओली र नेपाल समूहको एकमत– पार्टी एकता बलियो बनाउने’
क्यानाडा नेपाल बैशाख २६ २०७८
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको ओली र नेपाल समूह पार्टी एकता बलियो बनाउने विषयमा एकमत भएको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदबाट विश्वासको मत लिने भएपछि दुवै समूहबीच केही दिनयता घनिभूत रुपमा छलफल भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार विश्वासको मत लिने भएपछि आइतबार अपरान्ह सिंहदरबारमा भएको दुवै समूहबीचको छलफलपछि संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दुवै समूह पार्टी एकता बलियो बनाउने विषयमा एकमत भएको जानकारी दिए । दुवै समूह पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताउँदै आए पनि सहमतिमा भने पुग्न सकेका छैनन् ।
आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा सांसद पदबाट राजीनामा दिने भन्दै नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरुले बताएका छन् । सोहीअनुसार खल्तीमा राजीनामा बोकेको विषयले एमालेभित्रको विवादको पारो अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर, एमाले सांसद्ले राजीनामा दिने भन्ने विषय चर्चामात्रै रहेको नेता नेम्वाङले बताए । छलफलका क्रममा पनि आफूले त्यस्तो नपाएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष ओली र माधवकुमार नेपालबीचको टेलिफोन सम्वादपछि सिंहदबारमा दुवै समूहका नेताहरुबीच छलफल भएको हो । फेरि पनि छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको जानकारी दिएका नेम्वाङले पार्टी भित्र विवाद रहेको र त्यसलाई मिलाउन दुवै समूहका नेताहरु लागिपरेको जानकारी दिए ।
बैशाख २६, २०७८ आइतवार १७:०४:२६ बजे : प्रकाशित
झलनाथ खनाललाई भेट्न अस्पताल पुगे इश्वर पोखरेल, खनालले भने - पार्टी मिलाउनुस् कमरेड
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल थप उपचारका लागि आज नयाँ दिल्ली लैजाने तयारी गरिएको छ ।
केही दिन अघि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएर उपचाररत खनालको मिर्गौला फेलपछिको स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्यमा जटिलता देखिन थाले पछि उनलाई नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने तयारी गरिएको हो ।
दिल्ली जानुअघि खनाललाई भेट गर्न एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल अस्पताल पुगेका थिए। उक्त भेटमा खनालले पोखरेललाई पार्टी मिलाउन आग्रह गरेको बताइएको छ । खनालले पोखरेललाई 'पार्टी मिलाउनुस् कमरेड ...' भनेको बताइएको छ ।
एमाले नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि दिल्ली लगिँदै
आषाढ २, २०७८ बुधवार १३:०५:२६ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । थप उपचारका लागि भारतको दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको एकता बचाउन आग्रह गरेका छन् ।
लगातार उच्च ज्वरो र हेमोग्लोबिन कम भएपछि केही दिन अघि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराइरहेका खनाल थप उपचारका लागि नयाँ दिल्लीस्थित एपोलो अस्पताल जाने तयारीमा छन् ।
उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकार र एमालेले चासो राखेको छ । पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितका नेताहरु अस्पताल पुुगेर खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
सोहीक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खनालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको फोन सम्पर्क गराएका छन् । बुधबार भएको फोन सम्पर्कमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।
अन्ततः ओली गले
दिल्ली लैजानुअघि टेलफोनमार्फत स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले खनालको उपचारका लागि सरकारले सहयोग गर्ने वचन पनि दिएका छन् ।
सोही क्रममा नेता खनालले अध्यक्ष ओलीलाई एमालेको एकता जोगाउन भावुकशैलीमा आग्रह गरेका छन् । यसअघिका घटनाहरुलाई बिर्सिएर पार्टी एकता गर्न ओलीलाई आग्रह गर्दै एमालेका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका खनालले भने, ‘कमरेड, म फर्केर आउँछु कि आउँदिन, त्यो पनि थाहा छैन । पार्टी एकतावद्ध बनाउनुहोस्, मेरो यही चाहना छ ।’
एकतावद्ध एमालेको चाहना आफ्नो रहेको भन्दै खनालले पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने स्थानमा ओली रहेकालाई आग्रह गरेको बताएका छन् । जवाफ अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफू लचिलो भएर प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीलाई जस्तै आफूलाई हेट्न आएका महासचिव पोखरेललाई पनि खनालले पार्टी एकताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेका थिए । खनालमा मिर्गौला फेलपछि देखिने स्वास्थ्य जटिलता देखिएको नर्भिक अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार १४:३३:२७ बजे : प्रकाशित
झलनाथ खनालको उपचार दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा शुरु, पार्टीको लागि छोडे यस्तो सन्देश
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचार दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा शुरु भएको छ । थप उपचारका लागि बुधबार दिउँसो भारतको नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका खनालको अहिले एपोलो अस्पतालमा उपचार शुरु भएको हो ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले अस्पतालमा खनालको उपचार शुरु भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले खनाल र उनको उपचारको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टरसित भेटघाट र स्वास्थ्यस्थितिबारे कुराकानी भएको बताएका छन् ।
पिसाब तथा रगतमा समेत इन्फेक्सन देखिएको थियो। नेता खनालमा मिर्गौलाको समस्याबाट हुने लक्षण र कोभिडपछि देखिने लक्षणहरुसमेत देखिएको छ ।
नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरुले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले टेलिफोनमार्फत स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दा खनालले पाटीलाई एकताबद्ध गर्न आग्रह गरेका थिए । भावुकशैलीमा खनालले अध्यक्ष ओलीसँग एमालेको एकताको लागि काम गर्न आग्रह गरेका थिए । दिल्ली जानुअघि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पनि खनालले पार्टी एकताका लागि नेताहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।
आषाढ २, २०७८ बुधवार २०:११:२२ बजे : प्रकाशित
माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता
काठमाडौं - नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता भएको छ।
बुधबार डा. भट्टराई नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका हुन् । उनीहरुबीच के बिषयमा छलफल भयो भन्ने खुलेको छैन । नेपाल र भट्टराईबीच भेटवाता हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यसअघि सोमबार नेता नेपाललाई भेट्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पुगेका थिए ।
उनीहरुबीच लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई कसरी कसिलो बनाएर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावाद रोक्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै कोरोना न्यूनीकरणका लागि सरकारको प्रयास फितलो भएको र नागरिकले खोप नपाएको विषयमा छलफल भएको थियो।
आषाढ २, २०७८ बुधवार २०:५८:४७ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविरल वर्षाका कारण उत्पन बाढी पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को छैठौं बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाध्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि र पानीको व्यवस्था गर्न पनि सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारले विपद्पूर्व नै सम्भावित जोखिमको आँकलन गरी तयारी गरिरहेको र हाल सोही नुरुप कार्य भइरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उद्धार र राहतकार्यमा अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलालाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए। उनले ठूलो संख्यामा जनताालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरुमै कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने बताए। उद्धारका लागि विभिन्न प्रविधिका पानीमा चल्ने साधनका साथै स्थानीयस्तरमा बन्ने साधन प्रयोग गर्न पनि उनले जोड दिए।
राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिनका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । यसैगरी उनले तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सिमावर्ती टोलीसँग कुरा गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न तथा पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिए ।रासस
आषाढ ३, २०७८ बिहिवार ०८:२६:५० बजे : प्रकाशित